Waa maxay qiimaha Billadda Dahabka Olimbikada? – Kasmo Newspaper
Waa maxay qiimaha Billadda Dahabka Olimbikada?
Updated - August 17, 2016 10:47 am GMT
Cayaartoyda ayaa u muuqata kuwo faraxsan,qiiraysan isla markaasna isla qab weyn, marka ay saaranyihiin masraxa lagu guddoonsiinayo abaamarinta Olimbikada,laakiin in ay hodan noqdaan,waxaa ay ku xirantahay dalalkooda.
Qaarkood waxaa lagu abaal mariyaa adduun ayan weligood ka fakhrin, halka qaar kale an la siinin, haba yaraatee, gambana.
Haddaba intee le’eg yahay qiimaha lacageed ee billad dahab ah leedahay?
Guddiyada Olimbikada qaranka ayaa qiime kala duwan ku abaalmariya cayaartoyda,dalalka ugu horreeyana waxaa ka mid ah Malesiya,Thailand iyo Singapore oo billadda dahabka ah ku bixiya $740,000 oo Dollar.
Waxaa ku soo xiga Taiwan oo 640,000 Dahabka,223,000 Qalinka, iyo $160,000 Maarta ku bixisa; Azarbaijan $250,000 Dahabka, $124,000 Qalinka, iyo $62,000 Maarta; Philippine $215,000 Dahabka, $107,000 Qalinka, iyo $43,000 Maarta.
Laakiin dalka Shiina sidaas uma aha deeqsi, wuxuuna cayaartoyda billadda dahabka ku abaalmariyaa $25,000 oo Euro,wuxuuse ugu kabaa hadiyado kale,sida gawaari iyo guryo la siiyo cayaartoyda iyo qoysaskooda.
Dalka Maraykanka qiimaha billadda dahabka ah waa $25,000 oo Dollar, Qalinkana $15,000, Maartana $10,000 oo Dollar, waxaana loo canshuuraa sidii badeeco dibadda laga keenay oo kale. Waxaa loo yaqaannaa canshuurtii guusha “Victory Tax”, dood ayaana ka furan ku saabsan sidii loo joojin lahaa.
Dalalka Yurub waxaa ugu deeqsisan Talyaaniga oo cayaartoyda billadda dahabka ku abaalmariya 150,000 Euro, inta kale waa ka bakhaylsan yihiin, iyadoo Faransa bixiso ilaa Euro 50,000,Jarmalkana,wax ka yar Euro 20,000.
Dalka Britain ma leh abaalgudyo laakiin cayaartoydu waxa ay helaan lacago xayeesiinta ka soo gala iyo fursado dunida meel kale an ka jirin oo ah “Stamp”ka boostada, ama Frankaboolo lagu xasuusto.
Fanny Blankers-Koen (Sawirka, waxaa ay ahayd orodyahan u dhalatay dalka Holland oo ku guulaysatay 4 billadood oo dahab ah, Olimbikadii London, sannadkii 1948kii. Markii ay soo laabatay magaalada Amsterdam waxaa ay ku abaalmarisay 1 baskiil.
Wakhtigu aad ayuu isu beddelay, cidda bixisa abaalgudyada malaayiinta ah ma ahan xukuumadaha, laakiin waa Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee kafaala-qaadka “Sponsor”, xayeesiintana kaga macaasha.
Billaduhu Kulligood ma wada dahab baa?
Noocan tartannada ee casriga ah oo markii u horreysay laga soo bilaabay dalka Giriigga,sannadkii 1896kii,waxaa lagu bixiyay kaalinta 1aad billadda Qalinka iyo xirmo ubax ah,kaalinta 2aadna billad Maar ah.
Kuwii ku xigay ee sannadkii 1900 ee Paris waxaa lagu bixiyay billad Qalin ah oo dhalaalaysa,laakiin billadda Dahabka waxaa lagu bilaabay ciyaarihii St. Louis ,1904tii iyo London 1908dii.
Billaduhu ma ahan gabi ahaantooda dahab,waxaana xeerka Guddiga Olimbikadu qabaa in ay ugu yaraan ku jiraan 6 gram oo dahab khaalisa ah,dhumuc ahaanna noqdaan 3 mm.Mararka intooda badan waxaa ay ka samaysanyihiin 90% Qalin,kuwii u dambeeyay oo dahab soocan ahaana waxaa u dambaysay,Olimbikadii dalka Sweden ee sannadkii 1912kii.
Sannadkan waxaa Rio lagu bixinayaa 2,488 billadood oo ah noocii u horreeyay oo dhanka bartama u buuran, waxaana dhexda uga jirta kuul yar oo bir ah oo sharqamaysa marka la ruxo. Waana sababtaas midda u sahlaysa cayaartoyda indhoolayaasha ah in ay gartaan, midda dahabka ahina waa tan ugu shanqarta weyn.
Waa adag tahay in billaduhu ka baxaan faraha cayaartoydii ku guulaysatay. Laakiin mararka qaar iyaga ayaa samafal ahaan isaga iibiya, si ay sadaqo ugu bixiyaan ,markaasna qiimaha suuqa ee billad dahab ah waa ka sarreeyaa midka runta ah.
Waxaa jira cayaartoy badan oo billadohoodii xaraashay, si ay ugu bixiyaan hawlo samafal ah, sida Anthony Lee Ervin oo billaddii uu ku helay Sydney 2000 ku iibiyay $17,000 oo Dollar, uguna deeqay dhibbanayaashii Tsunami-ga.